Hofisi Yebazi Iri Mudenga | Indonesia Iye Zvino
Mahofisi ari pafuroo yechi31
Muna 2008, Indonesia yakasvitsa nhamba yayakanga isati yambosvitsa yevaparidzi 21 699. Zvivako zvebazi zvakanga zvava zvidiki, uyewo zvaiva kure neJakarta nekuti panguva yazvakavakwa basa redu rakanga rakabhanwa. Saka zvaiva pachena kuti paidiwa bazi rakakura riri pedyo neJakarta.
Pashure pemakore anenge maviri, hama dzakatenga imwe nzvimbo yakanga yakasiyana zvachose nebazi rekare. Vakatenga furoo yese yechi31 yechimwe chivako chemhando yepamusoro chine nhurikidzwa 42 chiri pedyo nechepakati chaipo peJakarta. Vakazotengawo nhurikidzwa 12 dzechimwe chivako chiri pedyo kuti nhengo dzemhuri yeBheteri 80 kana kupfuura dziwane pekugara. Vakatengawo chivako chine nhurikidzwa shanu kuitira madhipatimendi anoona nezvemabasa ekubatsira mhuri yeBheteri.
Mhuri yeBheteri inogara munhurikidzwa dzinokwana 12
Hama nehanzvadzi dzinobva kune dzimwe nyika idzo dzinoita basa rekuvaka dzimba dzekunamatira, dzakabatsirana nemakambani eko pakugadziridza mahofisi acho nedzimba dzekugara. “Jehovha akaramba achitibatsira pamatambudziko aiita seachamisa basa,” vanodaro Hama Darren Berg vaitungamirira pabasa rekuvaka. “Semuenzaniso, taida kuisa michina yemazuva ano yekuchenesa mvura yetsvina, asi hurumende yakanga isingazivi nzira itsva iyi, saka yakaramba kutipa mvumo. Imwe hama yekuno inoita basa reuinjiniya yakabva yaendesa nyaya yacho kune mumwe mukuru mukuru. Mukuru mukuru wacho akabva angotipa mvumo, achitaura kuti ainyatsovimba nezvakanga zvataurwa nehama yacho.”
“Hatisisina kuhwanda. Iye zvino vanhu vava kuona Zvapupu zvaJehovha. Vari kutoona kuti hapana kwatichaenda”
Zvivako zvitsva zvebazi zvakatsaurirwa musi wa14 February 2015. Hama Anthony Morris III veDare Rinotungamirira, ndivo vakapa hurukuro yekutsaurira zvivako zvacho. “Iye zvino tava kuwanikwa munharaunda yakasimukira chaizvo, umo mune makambani makuru emuIndonesia,” anodaro Vincent Witanto Ipikkusuma, nhengo yeDare Rebazi. “ Hatisisina kuhwanda. Iye zvino vanhu vava kuona Zvapupu zvaJehovha. Vari kutoona kuti hapana kwatichaenda.”
Dare Rebazi, kubva kuruboshwe kuenda kurudyi: Budi Sentosa Lim, Vincent Witanto Ipikkusuma, Lothar Mihank, Hideyuki Motoi
“Kuparidzira Kuno, Mabiko Chaiwo!”
Mumakore achangopfuura, Zvapupu zvinotamira kuIndonesia zvichibva kunyika dzakasiyana-siyana zvakawedzera. “Vaya vanotamira kune dzimwe nyika dzine vaparidzi vashoma seyedu, vari kuita basa rinokosha chaizvo,” anodaro Lothar Mihank. “Unyanzvi hwavo, kushingaira kwavo uye ruzivo rwavo zvinobatsira ungano, uye vanobatsira hama kuti dzikoshese sangano rese rehama.” Chii chakaita kuti vatamire ikoko? Uye zvinhu zvakavafambira sei? Inzwa zvakataurwa nevamwe vacho.
Vakatamira Kunodiwa Vaparidzi Vakawanda
1. Janine naDan Moore
2. Mandy naStuart Williams
3. Casey naJason Gibbs
4. Mari (ari pamberi kurudyi) naTakahiro Akiyama (ari kumashure kurudyi)
Jason naCasey Gibbs vekuUnited States vanoti: “Takatarisa muBhuku Regore tikaona kuti pasi rese, Indonesia ndeimwe yenyika dzine vaparidzi vanotarisirwa kuparidzira vanhu vakawanda chaizvo. Dzimwe shamwari dzedu dzakamboshumira kunodiwa vaparidzi vakawanda, dzakabva dzatiudza kuti muIndonesia mune vanhu vakawanda vanogona kufarira chokwadi. Saka takafonera bazi reIndonesia, uye takanzi tiende kuBali. Ndima yeChirungu yainge ichangotanga muIndonesia, saka taizongosvikira kuita basa. Tainge takaronga kugara kuno kwegore rimwe chete, asi iye zvino tatova nemakore matatu. Vanhu vazhinji vatinoparidzira havasati vambonzwa nezveZvapupu zvaJehovha. Hakusi kunakidza ikoko kuri kuita ushumiri!”
Murume nemudzimai vava nemakore ari pakati pe40 ne60 vekuAustralia vanonzi Stuart naMandy Williams, vanoti: “Taida kuparidzira vanhu vane nyota yekunzwa chokwadi, saka takasarudza kutamira kuIndonesia. MuMalang, kuEast Java, tiri kuonana nemazana evadzidzi vepayunivhesiti vanotaura Chirungu uye vari kunyatsoteerera mashoko akanaka. Vari kufarira chaizvo jw.org! Tiri kunakidzwa chaizvo nekuparidzira kuno.”
Takahiro naMari Akiyama, avo vanopayona muYogyakarta, pachitsuwa cheJava, vanoti: “Kana tiri kuno tinonzwa takachengeteka kupfuura zvatinoita tiri kumusha kuJapan. Vanhu vari kuno vane mutsa uye vane unhu. Vakawanda vavo kunyanya vechidiki, vanofarira chaizvo kunzwa nezvezvimwe zvitendero. Rimwe zuva tichiparidzira netafura munzvimbo inopfuura nevakawanda, takapa vanhu magazini anenge 2 600 mumaawa mashanu chete.”
Murume nemudzimai vava kuda kusvitsa makore 60 vanonzi Dan naJanine Moore, vanoti: “Patinoenda kunoparidzira, vanhu vanotiunganira. Tinovanyemwerera, votinyemwererawo. Vanotanga nekuda kuziva kuti tiri kutaura nezvei, votanga kufarira, uye vonakidzwa nezvavanenge vanzwa. Patinovaratidza zvinotaurwa neBhaibheri, vamwe vacho vanoti, ‘Regai ndizvinyore pasi.’ Vanoshamiswa neuchenjeri huri muBhaibheri. Tava negore tiri kuno, asi tinotodemba kuti takanonoka kuuya. Taitsvaka ndima ine vanhu vakawanda vasati vambonzwa nezvaJehovha, uye takazoiwana!”
Misja naKristina Beerens, vakauya vari mamishinari muna 2009 uye iye zvino vava mubasa redunhu. Vanoti: “Kunyange pachitsuwa chinonzi Madura Island muEast Java, chimwe chenzvimbo dzemuIndonesia dzine maMuslim akanyura muchitendero chawo, vanhu vakawanda vari kuteerera zvatinoparidza. Vanhu vanomisa mota dzavo, vokumbira magazini. Vanoti: ‘Ndiri muMuslim, asi ndinonakidzwa nekuverenga magazini aya. Ndinogona kutorerawo shamwari dzangu here?’ Kuparidzira kuno, mabiko chaiwo!”
Minda Yachenera Kukohwa
Frank Rice paakasvika muJakarta muna 1931, Indonesia yaiva nevanhu vanenge 60 000 000. Iye zvino Indonesia yava nevanhu vanoda kusvika 260 000 000, zvekuti ndiyo iri panhamba 4 panyika dzine vanhu vakawanda pasi rese.
Zvapupu zvaJehovha zvakawedzerawo chaizvo muIndonesia. Muna 1946, Hondo Yenyika II ichangobva kupera, muIndonesia makangosara vaparidzi 10 vakatendeka. Mazuva ano, munyika yacho mune vaparidzi vanopfuura 26 000, uye izvi zvinoratidza kuti Jehovha ari kukomborera basa rekuparidza! Vanhu 55 864 vakapinda Chirangaridzo muna 2015 uye izvozvo zvinoratidza kuti nhamba yevaparidzi inogona kuwedzera chaizvo.
Jesu akati: “Chokwadi, kukohwa kukuru, asi vashandi vashoma. Naizvozvo, kumbirai Tenzi wokukohwa kuti atumire vashandi mukukohwa kwake.” (Mat. 9:37, 38) Vashumiri vaJehovha vari muIndonesia vanobvumirana nemashoko iwayo. Vakatsunga kuramba vachishanda nesimba kuti vabatsire pakuita kuti zita guru raJehovha ritsveneswe munyika iyi ine zvitsuwa zvakawanda.—Isa. 24:15.
Indonesia: Hofisi Yebazi Iri Mudenga